Chonga imisebenzi yoNye-ukuya-kuLowo usebenzisa uVavanyo oluMileyo kunye nolweTye oxwesileyo
Imisebenzi inokwahlulahlulahlula amagama okanye amagama, kuxhomekeke kwimeko kunye nento ofuna ukuyenza ngayo. Udidi olunye olubaluleke kakhulu luthatha isigqibo sokuba ngaba umsebenzi ngowomntu omnye. Unokwenza oku usebenzisa ubuchule bokuzoba obubizwa ngokuba nkqo kunye novavanyo lomgca othe tye.
Umsebenzi kukunye ukuya kwelinye ukuba unexabiso elinye lokuphuma kulo lonke ixabiso lokufaka kunye nexabiso elinye lokufaka kwixabiso ngalinye lokuphuma. Ngokusesikweni, ubhala le nkcazo ngolu hlobo lulandelayo:
Ukuba f ( x 1=) f ( x Mbini), emva koko x 1= x Mbini
Ngamagama alula, ukuba amaxabiso amabini okuphuma komsebenzi ayalingana, amaxabiso egalelo amabini kufuneka nawo afane.
Unokumisela ukuba yeyiphi na imisebenzi eye-to-one kwaye yeyiphi na eyaphula umthetho ngokubulala (ukuqikelela nokuzama), usebenzisa ubuchule be-algebraic, kunye negrafu. Uninzi lwezibalo zikhetha ubuchule begrafu kuba ikunika impendulo entle, ebonakalayo. Inkqubo esisiseko yegrafu luvavanyo lomgca othe tyaba. Kodwa, ukuze uluqonde ngcono olu vavanyo, kuya kufuneka uhlangane neqabane lakhe, uvavanyo lomgca wokuma nkqo.
Chonga umsebenzi ngovavanyo lomgca othe nkqo
Igrafu yomsebenzi ihlala ihambisa uvavanyo lomgca othe nkqo. Uvavanyo lucacisa ukuba nawuphi na umgca othe nkqo utsalwe kwigrafu yomsebenzi udlula kulo msebenzi ungaphindi kube kanye. Lo ngumzekeliso obonakalayo omnye kuphela Y value (output) ikhona kuyo yonke into x value (igalelo), umthetho wemisebenzi. Umzobo a ubonakalisa umsebenzi opasa uvavanyo lwelayini ethe nkqo, kunye noMzobo b uqulethe igophe elingenguwo umsebenzi kwaye ke ngenxa yoko uvavanyo lomgca wokuma nkqo.
Umsebenzi udlula uvavanyo lwelayini ethe nkqo, kodwa ukungasebenzi akunakuphepheka.
Chonga umsebenzi ngovavanyo lomgca othe tye
Yonke imisebenzi ipasa uvavanyo lomgca othe nkqo, kodwa inye kuphela ukuya kwenye-imisebenzi yokupasa uvavanyo lomgca othe tye. Ngolu vavanyo, unokubona ukuba kukho nawuphi na umgca othe tye odweliswe kwigrafti yokusika ngokusebenza ngaphezulu kwexesha elinye. Ukuba umgca udlula kulo msebenzi ngaphezu kwesinye, umsebenzi uyasilela kuvavanyo kwaye ke ayisiyiyo into eyenzelwa omnye. Umzobo a ubonakalisa umsebenzi odlula kuvavanyo lomgca othe tyaba, kunye noMzobo b ubonakalisa umsebenzi owuwileyo.
Uvavanyo lomgca othe tyaba lukhula lusebenzisaneni ukuya kolunye kwimisebenzi yabantu abaphula umthetho.
Zombini iigrafu kulo mzobo ziyimisebenzi, nangona kunjalo, ke bobabini baphumelela uvavanyo lomgca wokuma nkqo.
Uphi ulwelo lokuhambisa
ungathatha i-tylenol nge-advil
ngaphezulu kwekhawuntari ye-nausea meds
ipilisi emhlophe embhoxo 4h2
yintoni umhla wepentekoste